Fandikan-tenin'ny LANGUAGE WORLD 104 - Vi-VersiGoo dikan-teny tany am-boalohany sy En-VersiGoo dikanteny fanombohana - The Holy Land of Vietnam Studies
Ny tranokala THE HOLYLAND OF VIETNAM STUDIES - holalmovies.com mampiasa ny Gtranslate1 fitaovana, mba hahafahan'ny mpamaky manindry ny sainam-pirenena tsirairay - afaka mahita eo amin'ny zorony ambony ankavanan'ny pejin-tranonkala - hahitana ny Fandikan-teny 104 amin'ny atiny rehetra amin'ity tranokala ity.
GTRANSLATE manampy Ireo mpamaky manerana an'izao tontolo izao dia afaka mahita NY FIVORIANA MASINA LOHEVITRA VIETNAM amin'ny fandikan-teny 104
ny tranonkala THANH DIA VIET NAM HOC [Thánh địa Việt Nam học] - www.hitoriam.com no dikan-teny tany am-boalohany ao Vietnamianina. Ary ny tranokala NY TENAN'ANDRIAMANITRA HO AN'I VIETNAM - holalmovies.com no dikan-tenim-pirenena vahiny amin'ny teny anglisy izay fanombohana starter ho an'ny fandikan-teny hafa eran'izao tontolo izao. GTranslate afaka mandika izao Fiteny 1042 ary havaozina tsy ho ela ny fiteny ambiny.
1: Ilay namorona ny GTranslate izay Edvard Ananyan - ny mpanorina & CEO an'ny GTranslate Inc - dia mpahay fizika tanora manana mari-pahaizana Masters avy amin'ny Youngstown State University, Ohio, Etazonia. Tamin'ny 2006 dia nanomboka ny mitondra ny asany IT tamin'ny taona 2009 niaraka tamin'ny toeran'ny programmer mpiara-miasa ao amin'ny Netsys JV LLC. Tamin'ny taona 2010 dia voafantina ho mpianatra Google Summer of Code ary niara-niasa tamin'ny Google Inc izay nametrahany ny fanitarana ny Copy Copy ho an'i Joomla. Nanomboka tamin'ny taona XNUMX izy dia nanao fifanarahana fakan-kevitra niaraka tamin'ny The World Bank izay namolavola ny Complaints Logging System ho an'ny fitantanana ny tetikasa sy ny fanoherana ny kolikoly. (Loharano: gtranslate.io)
2: GTranslate dia nampiasa ny fandikan-teny milina neural Google izay tena marina ho an'ny mpivady fiteny malaza. Ohatra, ny kalitao fandikana statistika ho an'ny teny Espaniôla amin'ny teny anglisy dia laharana faha-6 amin'ny 10, ka ny 10 no fandikana tonga lafatra. Ny mpandika teny amin'ny ankapobeny dia laharana 8.5 ary ny fandikan-tenin'ny milina neural vaovao dia 8.3. (Loharano: gtranslate.io)
(Visited 1,689 fotoana, 7 fitsidihana amin'izao fotoana izao)
← Atrikasa iraisam-pirenena momba ny fampianarana ARETNAMESE sy TAIWANESE TOKOA 11 / 2019 (Fizarana 1)
FAHASALAMANA - HUNG NGUYEN MANH, Profesora mifanerasera, Dokotera ny Phylosophy ao anatin'ny tantara →
Comments Off momba ny TECHNIQUE an'ny VAHOAKA ANNAMESE - Fizarana 1: Ahoana no nahitana sy nanonona an'io antontan-taratasy io?
Fiteny VIETNAMESE ho an'ny Vietnamese sy ny vahiny… (7,933)
Comments Off amin'ny Alohan'ny hijerena ny TANY - Fizarana 1
Fitsidihana anio: 324
Andro farany 7 nitsidika: 2,299
Total visits: 420,550